Mbola Salama ve ny Hihinao?
Mifohaza! | Jona 2014
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bengali Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Népali Ourdou Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
TENA be dia be mihitsy ny olona marary hihy, eran-tany. Misoko mangina anefa io aretina io, ka mety tsy ho fantatra akory amin’ny voalohany. Izao no lazain’ny Gazety Iraisam-pirenena Momba ny Ativava (anglisy): ‘Maro ny aretin’ny ativava, fa ny aretin’ny hihy no anisan’ny tena mampijaly ny olona.’ Lazain’io gazety io ihany koa fa ‘ratsy be ny vokatr’ilay aretina eo amin’ny tsirairay sy ny fiaraha-monina satria manaintaina izay voany, tsy mahavita asa, ary tsy afaka misakafo tsara sy miaina ara-dalàna.’ Andeha àry hodinihintsika ny momba an’io aretina miely be io. Hanampy anao hitandrina tsara izany, ka ho salama foana ny hihinao.
Ny tsara ho fantatra
Mandeha tsikelikely ilay aretina. Somary manaintaina aloha ny hihy amin’ny voalohany. (Io ilay antsoina hoe gingivite.) Ahoana no amantarana hoe efa aretina ilay izy? Mandeha ra ho azy indraindray ny hihy. Mety handeha ra koa anefa ilay izy rehefa borosiana ny nify, na koa rehefa kitihin’ny dokotera.
Raha mbola mitohy ihany ilay aretina, dia lasa mihasimba ny nify sy ny selan’ny hihy. (Io indray ilay antsoina hoe périodontite.) Mety tsy hahitana famantarana anefa izy io, raha tsy efa lasa lavitra. Ireto avy, ohatra, ny soritr’aretina fahita matetika: Mihozongozona ny nify na lasa makaka, misy elanelany ny hihy sy ny nify, mamofona ratsy ny vava, mandeha ra ny hihy na koa midina ambany be, ka hoatran’ny hoe mihalava ny nify.
Inona no mahatonga an’ilay aretina?
Betsaka ny mety ho antony mankarary ny hihy, fa ny mateti-pitranga indrindra dia ny bakteria miraikitra amin’ny sisin’ny nify. Raha tsy afaka izy ireny, dia mety hivonto ny hihy. Ahoana raha mbola mitohy ihany izany? Manomboka mihataka amin’ny nify ny hihy, ka lasa misy bakteria matevina eo anelanelany, izany hoe ao ambany hihy na amin’ny sisin’ny nify. Raha vao tafiditra any anefa ny bakteria, dia lasa manimba ny nify sy ny selan’ny hihy. Rehefa mihamatevina indray ireo bakteria ireo, dia mihamafy tsikelikely. (Io no antsoina hoe tartre.) Sarotra esorina izy amin’izay, satria lasa mafy sady miraikitra amin’ny nify. Vao mainka àry mihasimba ny hihy, rehefa mitranga izany.
Ireto koa anisan’ny mety hankarary ny hihy: Ativava tsy voadio tsara, fanafody mampihena ny hery fiarovana, aretina avy amin’ny virosy, adin-tsaina tafahoatra, diabeta tsy voatsabo, toaka be loatra, paraky, ary sigara. Ho an’ny vehivavy bevohoka, dia anisan’ny mety hahatonga ny aretin’ny hihy indraindray ny hormonina miovaova.
Dia inona no vokany rehefa marary ny hihy? Manaintaina ny ativava, ary mety hiala hatramin’ny nify mihitsy ka tsy hahavita hitsako tsara intsony ilay olona. Mety hiova koa ny endriny sy ny fomba fiteniny. Hitan’ny mpikaroka mihitsy aza fa misy fiantraikany amin’ny fahasalaman’ny vatana manontolo ilay aretina.
Voalohany indrindra aloha, dia fantaro hoe efa marary ve ny hihinao. Diniho avokoa ireo famantarana voaresaka tato amin’ity lahatsoratra ity. Raha hitanao fa miseho aminao ny sasany amin’izy ireny, dia manatòna mpitsabo nify mahay, izay afaka hikarakara tsara ny hihinao.
Mbola azo sitranina tsara ny aretin’ny hihy, raha vao manomboka. Ahoana kosa anefa raha efa lasa lavitra ilay izy? Raha izay no mitranga dia mila atao haingana izay hampijanona azy, mba tsy hanimba ny nify sy ny selan’ny hihy manodidina ny nify. Efa manana fitaovana manokana ny mpitsabo. Vitan’izy ireo àry ny manala ny bakteria matevina eo amin’ny nify, na ao ambany hihy izany na eo amboniny, ary na dia efa miraikitra be aza ilay izy.
Aleo anefa misoroka toy izay mitsabo. Mety ho sarotra mantsy indraindray ny manatona mpitsabo nify mahay. Diovy tsara àry ny ativava, sady karakarao tsy tapaka. Ho salama tsara ny hihinao amin’izay!
DIOVY TSARA NY ATIVAVA
Borosio indroa isan’andro, fara fahakeliny, ny nify. Misy anefa mila mihoatra an’izany, ohatra hoe isaky ny avy misakafo.
Borosy malefadefaka ampiasaina, ary koseho tsikelikely sady ataovy moramora.
Mampiasà kofehy fanadiovana nify isan’andro. Indraindray aza ilaina ny mampiasa borosy manokana na hazokely fisokirana nify.
Fahasalaman’ny Vatana & Saina Fiadanan-tsaina & Fahasambarana
MATOAN-DAHATSORATRA Te Hahazo Namana Tsara ve Ianao?
FANTARO IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY Fahafatesana
FIANARANA AVY TAMIN’NY LASA Joseph Priestley
HO AN’NY FIANAKAVIANA Mianara Mitsitsy Vola
NISY NAMORONA VE? Ny Voantay
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Jona 2014 | Te Hahazo Namana Tsara ve Ianao?
Jona 2014 | Te Hahazo Namana Tsara ve Ianao?
MIFOHAZA! Jona 2014 | Te Hahazo Namana Tsara ve Ianao?